သင့် ဦး နှောက်ကိုစွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်အဝနှင့်လေ့လာရန်အစားအစာများ စတိုင်လ်အမျိုးသားများ
ပိုကောင်းတဲ့လေ့လာမှုအတွက်အစားအစာတွေရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိပါသလား။ သင်စာမေးပွဲသို့မဟုတ်စာမေးပွဲဖြေသည့်အခါဒူးထောက်ရန်လိုသည့်အခါအစားအသောက်သည်နောက်ကျောထိုင်ခုံကိုယူလေ့ရှိသည်။ သို့ရာတွင်၊ ညံ့ဖျင်းစွာစားခြင်းသို့မဟုတ်ဗိုက်ထဲ၌အစာကိုတိုက်ရိုက်စားခြင်းသည်မကောင်းပါ။ လေ့လာနေစဉ်သင်ရွေးချယ်သောအစားအစာသည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုစာအုပ်များမှအချက်အလက်အားလုံးကိုစုဆောင်းရန်များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
အချို့သောအစားအစာများသည်စိတ်ကိုအားဖြည့်ပေးသည်၊ နိုးကြားနေစေရန်၊ အာရုံစူးစိုက်ရန်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်ဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ ရှည်လျားသောလေ့လာမှု session တစ်ခုအတွင်းမှာ။
အဓိကကတော့အစားအစာအားလုံးမှာအာဟာရဓာတ်ကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ဖို့ပါဘဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစားအစာညံ့ဖျင်းခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမှအကျိုးမပြုပါ။ဦး နှောက်ကကစားသူများအပါအ ၀ င်။ သို့သော်အများဆုံးသိပြီးဖြစ်သောကျန်းမာပြီးအာဟာရရှိသောအစားအစာများတွင် ဦး နှောက်နှင့်လေ့လာမှုများအတွက်သူတို့၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထင်ရှားစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏တံတောင်ဆစ်ကိုဒူးထောက်ရန်လိုအပ်ပါကအနီးအနားရှိအောက်ပါအစားအစာများကိုစားရမည်။
ကော်ဖီသည် ဦး နှောက်ကိုလေ့လာရန်နှင့်နိုးထရန်အတွက်ဂန္ထဝင်အစားအစာဖြစ်သည်။ ဤအချိုရည်သည်သင့် ဦး နှောက်အတွက်လောင်စာဖြစ်ပြီးသင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ ၎င်း၏သက်ရောက်မှုများသည်ယာယီသာဖြစ်ပြီးသူတို့ပျောက်ကွယ်သွားသည့်အခါတိုင်းသဲလွန်စတစ်ခုနောက်တစ်ခုကိုရှာရန်မသင့်ကြောင်းသတိရရမည်။ တစ်နေ့လျှင်ခွက် ၂-၃ ခွက်ထက်မပိုရန်အကြံပေးသည် (အလွဲသုံးစားမှုသည်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်၊ သင့်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမစဉ်းစားနိုင်အောင်တားဆီးနိုင်သည်)၊ ၎င်းကိုသင့်တင့်မျှတစွာသောက်သုံးပြီးအချိန်ကိုကောင်းစွာရွေးချယ်ပါ။.
သင်လေ့လာမှုအတွက်ကော်ဖီအစားထိုးနည်းလမ်းတစ်ခုရှာနေလျှင်လက်ဖက်စိမ်းကိုစဉ်းစားပါ။ ၎င်းသည် antioxidants ပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်လက်ဖက်စိမ်းသည် ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု၏မဟာမိတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများသည်လေ့လာမှုပြုလုပ်ရာတွင်ကြီးမားသောအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကျန်းမာသောသောက်သုံးမှုကသင့်အားအာရုံစူးစိုက်မှုရှိစေနိုင်သည်.
ဦး နှောက်သည်လေ့လာရန်စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီးရှုပ်ထွေးသောဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည်ထိုစွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ သင်တို့ကိုမွတ်သိပ်လျှင်၊ ပိုကောင်းသောအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်များရရှိစေရန်လတ်ဆတ်သောလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်များနှင့်အတူဂျုံလုံးပေါင်မုန့်လုံးတစ်လုံးပါ ၀ င်သည် သင့်ရဲ့လေ့လာမှုအစည်းအဝေးများတွင်။ ဂျုံခေါက်ဆွဲတစ်ခုလုံးသည်အစားအစာအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းအပိုင်းကိုထိန်းချုပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်သင်အလွန်လေးလံလွန်းခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်မြန်ဆန်ခြင်းတို့ကိုခံစားရလိမ့်မည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကော်ဖီကဲ့သို့ပင်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်သည်သင်၏မဟာမိတ်များဖြစ်နိုင်သော်လည်းမှန်ကန်သောအတိုင်းအတာဖြင့်သာဖြစ်သည်။
သင်၏အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုဘာဖြည့်ရမည်နည်းကိုသင်မသိလျှင်ဆော်လမွန်သည်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်သုံးသပ်သင့်သည်။ မင်းရဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာ အိုမီဂါ3ဖက်တီးအက်စစ် သင်၏ ဦး နှောက်စွမ်းရည်၊ အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတို့အတွက်အကျိုးရှိသည်စာအုပ်များတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသိမ်းပိုက်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သောအရာများ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့် ဦး နှောက်လိုအပ်သောအခြားအာဟာရများဖြစ်သောဗီတာမင် B နှင့်ဆယ်လီနီယမ်တို့ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်လေ့လာရန်အများဆုံးပြည့်စုံသောအစားအစာများ။ အကယ်၍ သင်သည်ဆော်လမွန်သမားမဟုတ်လျှင်အိုမီဂါ ၃ ကြွယ်ဝသောအခြားငါးများရှိသောကြောင့်စိတ်မပူပါနှင့်။ ၎င်းတို့သည်သင်၏အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်သဟဇာတမဖြစ်နိူင်ပါ။ သို့မဟုတ်သင်အရသာရှိသောအသစ်တစ်ခုကိုတီထွင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါးကိုကြည့်လိုက်ပါ ဦး ။ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေရန်မည်သို့။ သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းကိုတိုးမြှင့်ဖို့အဲဒီမှာသင်အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်များစွာတွေ့လိမ့်မည်။
၎င်း၏မြင့်မားသော antioxidant ပါဝါဖြစ်ပါတယ် မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမြင်မှုစွမ်းရည်အတွက်အကျိုးရှိသည်ထို့ကြောင့်လေ့လာမှုပြုသည့်အခါဘလူးဘယ်ရီပတ် ၀ န်းကျင်ရှိခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ဖြစ်သည်။
သင်၏ ဦး နှောက်နိုး။ သတင်းအချက်အလက်တန်ချိန်ကိုအလွတ်ကျက်ရန်လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်၏မိနစ်တိုင်းတွင်အများဆုံးရရှိရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့အပြင်ဟင်းနုနွယ်ရွက်သည်သင့်အားအာရုံကြောစနစ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မဟာမိတ်ဖြစ်သောဖောလစ်အက်စစ်ကိုဆေးထိုးခြင်းဖြင့်သင့်အားကူညီနိုင်သည်။ ပန်းဂေါ်ဖီသည်လေ့လာခြင်းနှင့်ကျန်းမာခြင်းတို့အတွက်နောက်ထပ်ကောင်းမွန်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်မှောင်နေသောအသီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအားလုံးလေ့လာသင့်သည်.
အထက်ဖော်ပြပါအစားအစာများသည်လေ့လာမှုနှင့် ဦး နှောက်ဝယ်လိုအားမြင့်တက်ခြင်းတို့အတွက်သင့်ကိုကူညီသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်အချိန်အခါများတွင်၊ အကောင်းဆုံးမှာ၊ အမျိုးမျိုးသော၊ ကျန်းမာသောအစားအစာကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖြည့်စွက်ကာ, မည်သည့်အစာကိုမျှမစားရန် (အထူးသဖြင့်နံနက်စာ) ကိုမသောက်ရန်လိုအပ်သည်သို့မဟုတ်သင်၏အာရုံခံများကသတိပြုမိလိမ့်မည်.
လည်း ဦး နှောက်ကိုအားစိုက်ခြင်းမှအနားယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးရန်သေချာစေပါ ဒါကြောင့်သင်ဟာလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကိုအာမခံချက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်အောင်။ ထိုသို့ပြုရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် အိပ် တစ်နေ့လျှင် ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအကြားဖြစ်သည်။
စာမေးပွဲဖြေဆိုသည့်နေ့တွင်ဤအစားအစာများကိုသင်မစားရန်လိုအပ်သည်မင်း ဦး နှောက်ကိုကောင်းကောင်းအစာကျွေးနေရင်ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့အစားအစာ၊ ကော်ဖီတစ်ခွက်ဒါမှမဟုတ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်လောက်သောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » လေ့လာရန်အစားအစာ